जमानाको कुराः गरिव गरिव नै , मध्यम बर्ग मध्यम नै र धनि धनि हुदै जानु का कारणहरु | Wakhet Diary
जमानाको कुराः गरिव गरिव नै , मध्यम बर्ग मध्यम नै र धनि धनि हुदै जानु का कारणहरु
Posted on July 1, 2014 by Wakhet Diary	जमानाको कुराः गरिव गरिव नै , मध्यम बर्ग मध्यम नै र धनि धनि हुदै जानु का कारणहरु
(आजको ब्लगमा गरिव र मध्यम बर्ग किन जहिले पनि अपुगको जिवन बिताउन बाध्य हुन्छन र धनि बर्ग किन जहिले पनि धनि को धनि बन्दै जान्छन भन्ने बारे छ। )
गरिव बर्ग, मध्यम बर्ग, धनि बर्ग यो हामी आफैले आफैलाई दिएको एउटा स्टाटस हो र आफैले यस्लाई परिवर्तन नगर्दा सम्म यो उस्ता को उस्तै रहन्छ। यहि स्टाटस बचाउने र परिवर्तन गर्ने मोह मा मानिसको जिवन सँघर्ष मै बित्छ। जिवन को सन्तुष्टी र असन्तुष्टी तीन बर्ग सबैलाई उति कै सताउछ। गरिव भएर मानिस दुखी (असुन्तष्टी) छन भन्यौ भने गलत हुन्छौ। गरिव हरु पनि जीवनलाई सन्तुष्टीले बिताएका हुन्छन। मध्यम बर्ग का मानिसहरु लाई सबै भन्दा गाह्रो र तनाव हुन्छ यिनि हरुको स्वभाव पनि त्यस्तै मध्यम नै हुन्छ केहि क्षण मै अति खुसी र केहि क्षण मै अति दुखि हुने र फेरि सम्हालिएर मध्यम मै बस्ने आधा सन्टुष्टी आधा असन्टुष्टीमा रहेन यो बर्गको बिशेषता हो । उनिहरु गरिव हुन पनि चाहादैनन उनि हरुको सोच ले उच्च धनि बर्ग हुन पनि सक्दैनन। उच्च धनि बर्ग हरु धनि त हुन्छन उनिहरु माथी सबैको नजर हुने हुनाले निजी जिवन गरिव र मध्यम बर्गले जसरी आफु स्वतन्त्रताले बिताउन सक्दैनन। यि धनि बर्गहरु जिवन मा सबै थोक प्राप्त गर्दछन मात्रै स्वतन्त्रता बाहेक। सबै कुरा किन्न सकेर पनि स्वतन्त्रता किन्न नसक्ने अभागी हरु उच्च धनि बर्गका मानिसहरु हुन। उनिहरु सधै भरि आफ्नो सम्पती र जीवन असुरक्षाको खतरा मा बाँचिरहेका हुन्छन।
गरिव गरिव नै , मध्यम बर्ग मध्यम नै र धनि धनि हुदै जानु का कारणहरु
गरिव बर्ग – मानिसको जीवन लाई लागत, आम्दानी र प्रतिफल को तुलनात्मक लेखा जोखा र उपयोग गर्ने क्षमताले नै मानिसलाई बिभिन्न बर्ग मा बर्गिकृत स्वत गरेको हुन्छ। यस्को कुनै मापडण्ड हुदैन। भलै दिन मा या बर्षमा यति आम्दानी गर्ने हरु लाई गरिव भनिने भए पनि त्यो पुर्ण मापडण्ड होईन। ठाउँ, अवस्था ले फरक पार्दछ। जस्तै अरेबियन मुलुक मा माग्ने हरु कार मा घुम्छन। नेपाल मा कार हुनु मध्यम बर्ग को जिवन शैली हो तर उनिहरु माग्दैनन। अमेरिका मा १ डलर ले नास्ता नआउन सक्छ तर नेपाल मा दालभात नै खाएर छाक तार्न सक्छन। आजको बल्ग गरिवी को मापडण्ड के हो ? भन्दा पनि गरिव किन गरिव बर्ग, मध्यमबर्ग, उच्चबर्ग को सोच को कुरा छ।
गरिव बर्ग – उनिहरुमा ठूलो घरमा बस्ने कार मा घुम्ने सपना भन्दा पनि दिन मा कति काम गर्ने र कति ले आवश्यक के के किन्ने ? दाल, चामल, नुन तेल यति मै सिमित हुन्छ। उनिहरु आम्दानी को सबै हिस्सा खाएर सक्छन। बचत गर्न सक्दैनन त्यसैले उनिहरु गरिव को स्टाटस बाट मध्यम बर्ग मा उक्लिनु सक्दैनन। कारण उनिहरुले सधै मध्यम बर्गलाई नै हेर्दछन र आफ्नो छोरा छोरीलाई उनिहरुले जे खान्छन त्यहि खुवाउन, उनहिहरुले जे लगाउछन त्यहि किनि दिनु मा नै सबै पैसा लगानी गर्दछन। उत्पादन मुलक पूँजी र लगानी नगरेको ले नै उनिहरु गरिव को गरिव नै रहन्छन। जस्लाई हामी नगद प्रबाह भन्छौ। उनिहरु जति कमाउछन त्यो सबै दैनिक खर्च मै गुमाउछन।
मध्यम बर्ग – यो बर्ग जहिले पनि स्टाटस परिवर्तन गरेर उच्च धनि बन्नु पर्छ भन्ने चाहान्छन तर उनिहरुको उनिहरुले पनि उच्च धनि बर्ग सँग के के छ । त्यो हेर्न खोज्छन। सबै भन्दा, नोकर चाकर देख्छन, उच्च धनिहरुको घर देख्छन। त्यस पछि कार देख्छन। बैक ब्यालेन्स कति होला भनेर अनुमान गर्दछन। म पनि त्यस्ते बन्छु भनेर जोतिएर काम गर्दछन। तर लगानी भने सबै अनउत्पादन मुलक ठाउँ मा गर्दछन। नोकर राख्नु खोज्छन त्यसलाई तलव दिनु पर्यो। त्यतै खर्च बढ्यो। घर-घरेडी जोड्छन त्यसको मुल्य त बृदी भै रहेको हुन्छ तर त्यो सगै मानिसको जरुरत र आवश्यकता पनि बढेको हुन्छ। त्यो जमिन बेचेर मा फलानो – फलानो गर्छु भन्ने सोच्यो भने त्यो कुनै ईच्छा नाप्दा पनि अपुरो हुन्छ। उनिहरु आफ्नो हैसियत भन्दा ठुलो सपना देख्छन। तर आफु सँग भएको लागत ले के आम्दानी मुलक गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णयमा चुक्छन। कार किन्छन तेल हाल्दै र मर्मत गर्दै पैसा सक्छन। अहिले सम्म र पछि को २-३ बर्ष सम्म को कमाई खर्च गरेर घर बनाउछन। यि यस्ता बर्ग हुन जस्ले आफ्नो तुलना सदेँव आफु भन्दा माथिको सँग गर्दछन तर उनिहरुले लगानी र आम्दानी कहाँ गरेका छन त्यो अध्यान गर्न चुक्दछन। मध्यम बर्ग आम्दानी र नगद प्रबाह त्यसैमा गरिरहेका हुन्छन जुन लगनाी ले निरन्तर आम्दानी दिदैन, मर्मत र सम्हार को लागी लागत मात्रै बढाउछ। लगानी नै गर्न हरुले पनि अरुले के गरेर सफलता पाएको छ त्यो हेरेर गर्दछन। जस्तै एउटा को फेन्सी चलेको र धनि भएको लाग्यो भने फेन्सी पसल नै खोल्दछन। एउटा को होटेल राम्रो चलेको देक्यो भने उस्ले पनि होटेल नै खोल्न तम्सिन्छन। म.म. पसल यस्ता मा लगानी गर्दछन। उपभोक्ता समित हुने र चर्को प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँ मा लगनी गरेको र आफु सँग भएको भन्दा बढि लागत रिण लिएर शुरु गरेको , ब्यबस्थापन सम्बन्धि अनुभव नभएको ले उनिहरु मध्य धेरै असफल हुन्छन र त्यहि असफल हरुलाई उदाहरण मानेर अन्यले ब्यबसाय गर्ने आँत नै नगरी जागीर मा जीँबन बिताउछन। मध्यम बर्ग मध्यम मै सिमित हुनु को कारण नै लगानी र ब्यबसायको छनौट र ब्यबस्थापन अदक्षता हो।
उच्च बर्ग धनिहरु – उनिहरु सँग पुस्तैनी पूँजी हुन्छ। जस्लाई उनिहरुले आम्दानी आउने ठाउँ मा लगानी गर्दछन। बैक, कम्पनीहरुको शेयरहरु किन्छन, आफ्नै पूँजिले कमर्शियल भवनहरु, ठुला होटेलहरु बनाउछन जस्ले उनिहरुको आम्दानी बढि रहेको हुन्छ। त्यहि पूँजीलाई पुन आम्दानी मुलक ठाउँ मा लगानी गर्दछन र उनिहरु धनि मा झन धनि बन्दै गैरहेका हुन्छन। उनिहरु शिक्षा मा लगानी गर्न सक्छन र आफ्नो सन्तानलाई उच्च मनोबल भएको र दक्षता भएको बनाउन सक्छन। गरिव र मध्यम बर्गले सधे पैसालाई र आवश्कतालाई महत्व दिन्छन। उच्च धनिहरुले सम्भावना र भबिष्य लाई ध्यान दिन्छन। उनिहरुलाई लाग्छ गरिव र मध्यम बर्ग (पब्लिक) खर्च गर्न सक्ने भएका छन। उनिहरुले कहाँ कहाँ खर्च गरिरहेका छन त्यो हेरेर आफ्नो पुँजी लगानी गर्दछन र छिट्टै लगानी उठाएर फाईदा मा जान्छन।
हामी हाम्रै जिवन शैली र सोच कै कारण अझै पछि पर्ने पक्का छ। पहिले गरिव हरु उच्च शिक्षा लिन नसकेको ले पनि पछि पर्दथे। अव गरिब हरु खान नसकेको ले पनि पछि पर्ने छन। पहिले गरिव हरु किसान हुन्थे। आफ्नै बारीमा फलाएका अनाज उपयोग गर्दथे र तुलनात्मक रुमा स्वस्थ र कडा मेहेनत गर्न सक्ने हुन्थे। अव का गरिव हरु खेती पाती छाडेको र कम गुणस्तरको खाना खाएको कारण ले स्वास्थ्यमा आउने समस्या र बिमार को कारण झन गरिव हुने छन। जव गरिवहरु खेतीपाती छाडेर पाकेटको सस्ताखाना हरु खान सुरु गरेका छन अहिले उनिहरु कै छोरा छोरी लाई हो जन्डिज हुने, किड्नी फेल समस्या आउने बिभिन्न समस्याहरु देखिने यि सबै हामीलाई हामीले खाएको खाना र जिवन शैलीले दिएको उपहार हो भन्ने सम्झाउने जागरुकहरुको सत्ता हामी चन्दा उठाउने अभियान कर्ता बन्न सजिलो मान्छौ। उठाएर १-२ जना को ज्यान बचायौ भने त्यसै मा गर्व गर्दछौ। तर समाज कता गै रहेको छ र भोली सयौ लाई यो समस्या आउने वाला छ भनेर जागरण फैलाउन चाहि कसैले पनि सक्दैनौ। फेरि मानिसमा यति अधैर्य बढि सकेेको छ कि सुन्ने कस्ले र सुनाउने कस्ले ?
जीवन यति निराशा जनक पनि छैन। प्रबिधि ले गर्दा गरिव हरु पनि सजिलै माथी उठ्ने सम्भावनाहरु पनि समस्याको साथ साथे आएको छ। यस्को लागी उद्यमशिलता को जरुरत छ। खाना मा प्रकृतिक पनको जरुरत छ। अव पनि म पढेर २-३ लाख मार्षिक तलव आउने जागीर खान्छु भन्ने मानसिकता छ भने यहि मासिकताले हामीलाई असफल बनाउने छ। उद्यमि बन्न कोशिस गर्ने हो भने २-४ लाख को आम्दानी एक दिन को उत्पादन बाट पनि हुन सक्छ। रोजगार को सृजना गर्न सक्छ। आफ्नो देशमा उत्पादन भए भने आयत कम हुन्छ। यहाँ उद्यमी को मात्रै होईन देशको आर्थिक बिकास पनि हुन्छ। अव को पालो उ जस्तै जीवन होईन आफ्नो पँजीले क्षमताले भ्याउने उद्यम को सुरुवाट नै स्टाटस परिवर्तन को सरल तरिका हो।
गरिव हरु मिडिया को पछि नलागौ। मिडिया मा थुप्रै कुरा हरु आउछन — फलानो ले फलानो फार्म खोल्यो। यति करोड को लगानी मा भएको छ जस्ता गरिवले आँत गर्नै नसक्ने लगानीहरुको देखाई रहेका हुन्छन। लाख भन्दा तल को लगानी का उद्यम हरु मिडियामा पर्दा पनि पर्दैनन। रायो र खुर्सानी को बिउ ५०० रुपैया भन्दा पनि तल पनि त किन्न सकिन्छ । आफ्नै बारी भएका किसान ले यो सुरुवात गरेर जिवन स्तर सुधार गर्न सक्छन भन्ने सन्देश लुकाएर करोड र अरब को लगानी को कुरा मात्रै समचार बन्छन।
गरिव हुनु, मध्यम बर्गि हुन, उच्चधनि बर्ग हुनु कसैको लागी कोहि पनि खतरा को कुरा होईन खतरा को कुरा भनेको हर कोहिले एकै चोटी धनि बन्ने सपना देखेर गलत बाटो मा लाग्नु सबै बर्गको लागी खतरा हो। यस्ले अपराध हरु जन्माउछ। हरेक मानिसमा आफ्नो आफ्नै क्षमता छ। क्षमताको पहिचान गरौ र उत्पादनमुलक काम मा जीवन लगानी गरौ। भगवान सबेको लागी बराबर छ। भगवान सबैको लागी बराबर छ भन्दैमा मलाई किन उस्को जति सम्पती दिएन भनेर गुनासो होईन बराबर सोच किन दिएन भनेर सोचौ। भगवान यस अर्थमा बराबर छ सबैलाई आफ्नै आफ्नै आचरण अनुसार को बाँच्ने उमेर दिएको छ। जन्दा र मर्दा नाङगै आउने र जाने समानता दिएको छ। यहि नै हो भगवानले दिन समानता। सबैले मर्नु पर्छ भनेर अनाआवश्यक सम्पतिको लोभले कसैको पनि बिगार नगरी आफ्नो मेहेनतले बाँच्यौ भने त्यहि नै सबै भन्दा ठुलो धर्म र आफुले कमाएको सन्तुष्टी र सम्पती हो।
निराशाबादी सोच, आम मानिसको जिन्दगीको पछाडी लागेर पिडा मात्रै सहने स्टाटस भन्दा आफुले आफैलाई सन्टुष्टी र खुसी बनाउने फर्मुला आफै भित्र खोजौ।
-स्यानु पाईजा, पात्लेखेत -७ , वाखेत